Ogaden News Agency (ONA) – HALGAN IYO HUBKII – Omar Jigjiga
HALGAN IYO HUBKII – Omar Jigjiga
Posted by ONA Admin	/ April 24, 2011
Nin la feedhtamaya ninkale ayaa wuxuu is arkayay in laga guulaysanayo balse taba barihiisi ayaa u sheegayay oo ku yidhi; adigaa guulaysanaya oo feedh-yahanka kale afka dhulka ugu ridi doona. Tababarihii ayuu wuxuu ku yidhi ” oo hadaan anigu guulaysanayo maxay gamcahaygu la daaleen dibnahayguna la dhiigayaan tabcaana aan la noqday? muxuuse ninka iga soo horjeeda iigu soo kakan yahay ama uu iigu soo dhiiranyahay?
Arinta noocan ah waxaa lagu tilmaamaa marka ay dhagaha iyo indhuhu is khilaafaan oo qofka uu garan waayo waxa uu maqlayo iyo waxa u arkayo midkoodii run ah !
Todobaadyadan iyo bilihii tagayba waxaan maqlaynay dabaqoodhigii dalka dibadiisa oo guulo ka sheeganaya kuna andacoonaya in halgankii dibada kasocday ay ku guulaysteen inay soo afjaraan. Waxay taasi ka mid tahay ereyada aan ka maqalay warbaahinta gumaysiga. Waxaanse labadayda indhood ku arkay dabaqoodhii doolka ahaa oo hal dhuntay iyo haldhaan raacday ka noqday Koonfur Afrika iyo dunida dacaladeeda.
Hadii ay kuguulaysteen halgankii dibada maxaa loo wayay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen? Meeye hebaladii hunguriga waynaa ee u kala haliilayay safaarad ku sheegta cadowga ee Pretoria?
Qoraagi caanka ahaa ee reer Australia ayaa wuxuu yidhi; uma baahnid inaad dhagaysato ama aad rumaysato waxa ay dadka kale kaa sheegayaan, waxaadse u baahantahay inaad yaqiinsato waxa aad tahay ee aad ogtahay inay dhabtahay.
Waxaa filan waa ku noqotay Ina Ilay markuu waayay wixii dhagaha loogu shubi jiray oo dadkii uu is-lahaa waxay kuu tagan yihiin wadooyinka Minnesota iyo London ay ka kala yaaceen arimahaasoo maal farabadanna looga cunay. Waxay indhihiisa rumaysan kari waayeen kumanaankii sida shinad ugu soo xoomay oo meel uu ka galana u diiday?
Dabcan Ina Ilay la-taliyihiisa ayaa u sheegay oo ku yidhi waad guulaysatay, taasoo la mid ahayd un feedh-yahankii isagoo dhiigaya uu tababarihiisu ku lahaa waad badinaysa.
Waxaan ruuxna ka qarsoonayn guusha wayn ee jaaliyaduhu soo hooyeen, gaar ahaan dalka Koonfur Afrika oo sanadkii hore dhamaadkisii horseed u noqotay halganka lagu sifaynayo daba qoodhiga dibada arintaasoo xaqiiqo ka dhigtay in aan isbadal samaynkaro hadii aan isku daynu. Waa hadaan sidaa go’aansano.
Hadaba inkasta oo guushaasi sal dhigatay lana hanjabiyay shirqoolkii cadowga ee loo adeegsanayay dhuuni raaca iyo maangabka, hadana waxaa si wayn loogu baahanyahay kor u qaadida iyo xoojinta ka hortaga siyasadaha cadowga.
Waxaa soo cusboonaatay in daba qoodhinimadii ku shaqayn wayday adeegsiga dhuuni raacayada in laysku dayayo hadda in lagu fuliyo dad sheeganaya hogaamiye dhaqameedyo iyo kuwo magacyo kale wataba. Waxaana hubaal ah oy dadku wada ogsoonyihiin inaan cidna lagu dhowrayn magac dhaqan iyo mid culimo iyo kuwa kalaba hadii ay isku dayaan inay u so huwadaan majara habaabinta shacabka.
Qormadan waxaad kal socon doontaan bilkasta Birmad iyada oo mar walba lagu falanqayn doono iskudayada cadowgu ku doonayo waxyeelaynta qurba joogta Ogadenia.
Omar jigjiga/KOONFUR AFRIKA